Fihaonan’ny Mpikatroka Teny Indizeny Ao Oaxaca, Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2014 16:28 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, Español, English
‘Loko Marevaka’, Meksika, Oaxaca. Sary avy amin'i Chris Ford (CC BY-NC 2.0)
Manasa ireo mpikatroka teny indizeny manerana an'i Meksika ny Global Voices, amin'ny alalan'ny fisantaran'andraikiny Rising Voices, ny Tranomboky Juan de Córdova, ary ny SURCO mba handray anjara amin'ny Fihaonana momba ny Fikatrohana Antserasera Hoan'ny Teny Indizeny izay hotontosaina amin'ny 3 hatramin'ny 5 Oktobra ao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina San Pablo, foibe manatantara ao Oaxaca de Juárez, Meksika.
Ny laharam-pahamehan'ity fihaonana ity dia ny hanomezana sehatra hoan'ny fifampianarana sy fifanakalozana hoan'ireo mpikatroka nomerika amin'ireo teny indizeny 25 ka mampiasa ny tenin'izy ireo ao amin'ny fampitam-baovao nomerika.
Anisan'ireo firenena manankarena hamaroam-piteny indrindra ao Amerika Latina i Meksika izay manana teny indizeny maherin'ny 300 ampiasaina andavanandro amin'ny resaka sy ny soratra, ary maro amin'izy ireo no ambavaloza an-dalam-pahaverezana. Nampiasaina vao haingana ny teknolojia ho fandraketana an-tahiry, sy ny famoronana rindrambaiko handratoana ny teny ho fomba iray hianarana sy hiarovana ireo teny ireo.
Misy ireo taranaka vaovao mampiditra ao amin'ny fiainana andavanandrony ny fidirana aterineto mba handefa sioka, hanao bilaogy sy handraki-peo ny tenin-drenin'izy ireo. Na dia izany aza, irariana ny isian'ny hetsika misongadina avy amin'ny indizeny mandray andraikitra hampiroborobo ny teny sy ny kolontsain'izy ireo antserasera mba hamelomana indray ny teny sy handrisihana ny taranaka hoavin'ny teny. Mahatonga ireo mpikatroka nomerika hanokana ny fotoanany sy ny fahaizany amin'ity hetsika mendrika ity izany fahatsapana fandraisan'andraikitra hoan'ny fiarahamonin'izy ireo izany.
Na dia eo aza ireo ezaka eny ifotony ireo, maro amin'ireo mpikatroka nomerika no miasa irery, ary miatrika samirery ireo fanamby atrehiny amin'izao fotoana izao, tahaka ny:
Fanamby ara-teknika - anisan'izany ny tsy fisian'ny kitendry (clavier) misy ireo tarehitsoratra ilaina amin'ny fanoratana ny teny.
Fanamby momba ny teny : anisan'izany ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny abidia marina anoratana, na ny olana ara-teknolojia amin'ny fiteny
Fanamby ara-tsosialy sy ara-kolontsaina: anisan'izany ireo fiarahamonina izay mety efa niresaka momba ny tokony na ny tsy tokony hizarana mivantana amin'ny aterineto ny tenin'izy ireo sy ny kolontsain'izy ireo.
Ny vaovao mahafaly dia misy ireo tetikady hiatrehana ireo fanamby tsy manam-paharoa ireo, araka ny asehoan'ireo tantara nahitam-pahombiazana tsy mitsaha-mitombo mikasika ny fomba fampiasan'ny fiarahamonina ny fampitam-baovao fandraisana anjara hampiroboroboana ny tenin'izy ireo antserasera. Na dia izany aza, ilaina hatrany ny mitady fomba hifandraisan'ireo mpikatroka nomerika ireo mba hifampizarany ny tantara sy ny traikefan'izy ireo.
Eo amin'izay sehatra izay no miditra ny Fihaonana momba ny Fikatrohana Nomerika Hoan'ny Teny Indizeny. Ahitana bilaogera, mpamokatra feo sy sary, mpanitsy lahatsoratra ao amin'ny Wikipédia, ary mpamorona rindrambaiko misokatra ity vondrona mpikatroka ity, ary mamorona votoaty antserasera amin'ny teny Meksikana indizeny avokoa izy rehetra ireo.
Amin'ny alalan'ny adihevitra eo amin'ny mpiaramiombon'antoka sy ny atrikasa fampiharana, ho maro ny zavatra hiseho hahafahan'ireo mpandray anjara manamafy ny fahaizany ara-nomerika sy hirotsaka an-tsehatra amin'ny firesahana momba ireo fanamby tokana atrehin'izy ireo. Fanampin'izany, hitrandraka ny lohahevitra momba ny fikatrohana amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ary ny fiantraikan'ny asan'izy ireo eo amin'ny fiarahamonina misy azy ireo ny atrikasa.
Hisy ihany koa ireo hetsika roa misokatra hoan'ny daholobe liana te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ireo fiarahamonina mba hanampy hitondra fanovana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny asa nomerika.
Afaka mandefa fangatahana fandraisana anjara ireo izay liana amin'izany ary misy ihany koa ny famatsiam-bola feno na ampahany amin'izany.
Fanamarihana : misokatra hoan'ireo mpandray anjara izay mampiasa teny indizeny sy monina ao Meksika ihany ity fanasana ity. Amin'ny 20 Aogositra 2014 ny farany fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, jereo ny Antonta-taratasim-pifandraisana ao amin'ny bilaogin'ny hetsika.